Na izany na tsy izany aza nefa ry Jean dia mba mitandrina ihany fa misy ny atao hoe “Tody” an! Sao dia hihevitra ny tsy ho tratry ny aloka eo ka hifoteran’ny natao vao ho gaga. Na ho ela na ho aingana anie ry Jean tsy maintsy hitombona foana ilay hafatra hoe anareo ny mandroso fa anay ny miverina. Sahinareo ve ry Jean ny mampiasa ny eo an-tanana rehetra na dia hahafaty anay aza mba hiverenana maka fahefana indray? Tsy aiko aloha izay tena fahamarinany fa tena ohatry ny tsy lojika ihany ilay fihetsikareo amin’ity manakatsakana ny olon-drehetra tsy hanao ny asany ity koa! Avy eo anefa dia ry zareo ihany no kianinareo hoe tsy manao ny asany. Ohatry ny efa mipetrapetraka daholo izany anie ry Jean ilay paikady voretra ataonareo ee! Mama sosy dia avy ianona dia avy eo indray ity aretim-boalavo ity. inona indray izao ry Jean no hanaraka eo?